Cartography - Page 4 - Geofumadas
Dhulgariirrada Google Earth
Dhowr maalmood ka hor ka hadlay USGS taarikada tectonic ayaa loo qabanqaabiyaa bandhigay in KML fudud ee k 107, iyo waa in la qiray in Google Earth ayaa bedelay nolosheena si ay suurto gal tahay in la arko oo la dareen fudud ah oo innagu ma nihin khabiiro ku sugan berrinka. Lakabkani ...
Khariidado waawayn oo qariib ah
Waxaan dhawaan kuu sheegayaa Rumsey ururinta maababka, oo aad ka arki karto Khariidadaha Google. Hadda Leszek Pawlowicz wuxuu inoo sheegayaa meel cusub oo loo qoondeeyay kaydinta iyo iibinta adeegyada taariikhaha taariikhiga ah, oo ay aasaaseen Kevin James Brown oo ka tirsan 1999. Tani waa Geographicus, oo iibisa adeegyada khariidada qaabab la daabacay, ...
Cartography of 60 sano ka hor
Maktabadda Khariidaddu waxay ina tusaysaa fiidiyow xiiso leh oo sheegaysa sida ay u sameeyeen joornaalada sanadaha 40. Naqshadda Google Earth Sameynta farsamada iyo dib u soo celinta muuqaalka. Meel ku dheelitirsiinta dhalaalinta shaashadda Abuuritaanka qaab muuqaal ah oo dijitaal ah La tashiga Tomtom Abuurista lakab daahfuran Abuuritaanka Qaboojiye Qaadida xajinta kartoonka sawireynta Mooring ...
Taarikada Tectonic ee Google Earth
Isticmaalka sayniska khusaysaa Google Earth ee juquraafiga iyo cilmi dhul sii xiiso leh, inkastoo aan ka barta of view dhaleeceeyo cadastral sax badan for our darafyadiisa, hadayana jirin. Halka ka hor ayuu waxa uu ka hadlayaa map kartoon ah kalana ah ee horumar ah tectonic dhex ...
Khariidadda magacaaga dambe
Akhrinta Joogista Joogto Waxaan ka helay arjiga "Dynastree" oo ah in lagu kala doorto khariidad sida badan ee magacaaga dambe. Sida xusuusta ah in khariidadu ay ku jiraan maadada. Aynu isku dayno Álvarez, Spain waa wax fudud, adiguna waad naaqusho oo riix badhanka raadinta; iyadoo natiijada gobollada lagu rinjiyeynayo shaqada ...
Waxaa ku jira Flickr, marka la gudbinayo waa inaan cusbooneysiinnaa wixii aan ka baranay juquraafi ahaan fasalka lixaad marka la eego Bariga Yurub, laakiin waa mid xiiso leh; Waa sawir laga arkay aragtida danaha ku saabsan saliida (ugu yaraan waxaa jira xoojin badan) ... iyadoo la eegayo aragtida naqshadeeyaha garaafka ...
Sidee inay soo galaan wadataa on Google Earth / Maps
Haddii aad rabto inaad dhex gasho khariidado gaar ah Khariidadaha Google ama Google Earth, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku qorto mashiinka raadinta, shuruucda qaar la raaco. Waa hab aad u macquul ah haddii aad rabto in aad cid dirto adigoo wada sheekeysi ama email ku xiran oo aan dooneyno inaad aragto. Magaca Google ee magacaabista ...
Halkan waxaa ku qoran liiska erayada ugu baadhay in 60 egeomates sanadkan 2008: 1. brand u gaar ah, (1%) kanu waa eraygii ugu muhiimsan ee ugu booqday ayaa yimid, guud ahaan kuwa ognahay blog ah loo isticmaalo, frequenting akhriyin rss toona badbaadiyey, iyo in ...
Qariiradaha hore ee Khariidadaha Google
Waqtigaan ka hor waxaan ku arkay bogga rasmiga ah ee Google Earth, laakiin hadda in Opaco ay i soo xasuusisay, waxaan qaatay daqiiqado yar si aan u arko sida ay u shaqeyso. Waxaan ula jeedaa khariidooyinkii hore ee Rumsey uruurinta Google Maps ama Google Earth. Tusaalahan waxay muujineysaa khariidadda jasiiradda ...
Waqtigaan ka hor waxaan ka hadlayaa khariidado is-dhexgal ah si aan u barto juquraafi, akhrinta Itacasig waxaan helay khariidado kale oo xiiso leh oo khariidado ah oo muuqaal ah oo la heli karo si loo soo dejiyo ama loo geliyo Khariidadaha Dagaalka. Fikradda ugu weyni waa taariikh iyo siyaasad, waxay noqon karaan kuwo waxtar u leh ujeedooyinka waxbarasho. Marka laga hadlayo ...
XII Kulan ee Geographers of America Latin America
Iyada World Geo waxaan maqlay shirka this, kaas oo noqon doona in Montevideo, Uruguay ka 3 in 7 April 2009 at the University of Jamhuuriyadda hoos theme ah: "Socodka ee Latin America ee Isbadal" mawduucyada of this maalin: Juquraafi ah Latin America oo isbeddel ah. Territoriyada ...
Ku soo celinta 5 Blogs
Dhawaan waxaan helay booqashooyin ay uga mahad celinayaan qaar ka mid ah blogyadii igu soo sheegey mehradooda; sidaas darteed waxa ugu fiican ee aan sameyn karo waa in aan soo celiyo raalli ahaanshaha iyaga oo ku talinaya. 1 Blog Ingeniería Blog ah oo aan soo dhaweynayo markii la abuuray, iyo in hadda on maalinta loogu talagalay in lagu taliyo blogs 5 amigos leeyahay ...
Fikradda xiisaha leh ee El Salvador
Waxaan halkaan ku arkay bogga weyn ee Gabriel Ortiz. Waa fursad lagu sameeyo latalin bilood 13 in CNR ah oo doonaya in ay dadka dhexgalaan degmooyinka iyada oo ah qalab nidaamka cadastre qaran midaysan. (The grayed jira fikrado shakhsi) Aim Kiro adeegyada la tashiga ee falanqaynta, ...
Khariidadaha Honduras ee GPS
Waan la kulmay farsamada casriga ah ee Honduras, ee daabacaddeedii saddexaad markii ay soo bandhigeen gabadh quruxsan iyada badeecadeeda. Waxaan ula jeedaa Navhn, oo soo jiidata maaddo oo la mid ah tiknoolajiyada ... halkan waxaa ka imanaya 4 sano ka dib marka loo eego Maraykanka. Adeegyadooda waxay ku saleysan yihiin ...
Xadiiqooyinka jootada 11,169 ee Spain
On this page aan ogaaday content fiican ah, qalinka Javier Colombo Ugarte In daraasaddan, marka laga reebo cad sababta iyo saamaynta ay dabcan ka 2007 ayaa la aasaasay ansixinta ETRS89 ah, this page bandhigaysaa geesaha 11,169 ah geodetic Spain (VG) ee WGS84. Waxay bixisaa ...
Vexcel, oo ah subsidiary of Microsoft, waxay bixisaa macluumaad ka Earth Virtual ah. Xalkan wuxuu xaqiijinayaa bixinta xogta 3D iyo sawirada tayada tayada leh ee ka muuqda kuwa internetka laga arko oo waxay noqon karaan mid aan la taaban karin, awood u leh inay doortaan magaalo, gobol, gobol iyo xitaa dhammaan caynsanaanta caalamiga ah. Google Geo wuxuu ku dhashay ...
Cartografia, Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
Well, sida wiilasha despedazamos Pict'Earth, hadda dib siin credit isaga dhex-abuurnimo, waxaad ka heli kartaa images leh xal fiican oo cusub ka badan kuwa Google Earth ... sida badan ku biiro ay initiative. .. ama Google in aad fikrad ka qaadato. Aan sameyno imtixaanka, habka aan ku baraneyno in aan ogaano ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 page Next